The Philippines is the New Ultimate Medical Tourism Destination | Health
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Caafimaadka » Filibiin waa Dalxiiska Dalxiiska Caafimaadka ee Cusub
Filibiin waa Dalxiiska Dalxiiska Caafimaadka ee Cusub
16 min akhris
Slippers iyo gaagaaban waa koodka lebbiska caadiga ah ee Hawaii. Sida degane ee Aloha Gobolka in ka badan 30 sano, tani waxay sidoo kale ii noqotay caadada aniga ahaan Jarmal-Maraykan ahaan.
Xiro dacas, si kastaba ha ahaatee, waxay la imaan kartaa khataro naf-gooyo ah oo lama filaan ah, oo ay ku jiraan caabuqa bakteeriyada hilibka cunta.
Sheekadeyda waxay ka bilaabmatay Hawaii iyadoo natiijo farxad leh ay ka heshay Filibiin.
Waa inaan u mahadceliyaa kooxda aadka u wanaagsan Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka iyo isbitaalka ugu fiican ee aan aqaano aduunka, Xarunta Caafimaadka Makati ee Manila, Filibiin, si aan macno ahaan u badbaadiyo noloshayda.
Halyeeyadayda gaarka ah ee jooga xarunta caafimaadka ee Makati waxay ka shaqeeyaan hogaaminta:
Dr. Caoili, Janice Campos, Cudur faafa
Dr. Paul Lapitan, dhakhtarka wadnaha
Dr. Victor Gisbert, Dhakhtarka Qalliinka
Run ahaantii waxaan u malaynayaa in aan xaalad xun ku jiri lahaa haddii aan ku tiirsanaan lahaa dhakhaatiirtayda gobolka aan ka soo jeedo ee Hawaii. Ka qayb galka shirwaynaha WTTC ee Manila waxay si lama filaan ah wax uga tartay caafimaadkayga waxaanan rajaynayaa tayada noloshayda mustaqbalka si weyn-waana sababta.
Kani waxa uu ahaa dalxiis caafimaad oo lagu sameeyay Filibiin si ficil ah
Dhammaantood waxay bilaabeen Jimcihii, Abriil 15, 2022. Waxaan helay tallaalka labaad ee xoojiyaha COVID ka hor intaanan ka tagin Honolulu Shir Madaxeedka WTTC ee Manila. Sabtidii, Abriil 16, waxaan u aaday inaan ka helo pedicure fudud Ala Moana Center Shopping kasoo horjeedka gurigayga Honolulu. Carruurtu si fiican ayay u dhacday marka laga reebo gooyn yar oo yar oo bilaabay inay u koraan bahal bahal ah.
Axadii, Abriil 17, waxaan u duulay United Airlines ilaa Guam, waxaan bedelay diyaarado, waxaana imid habeenimadii Isniinta (Abriil 18) ee Manila. Waxaan u wareejiyay hoteelkaygii, the Grand Hyatt.
Hurdo fiican ka dib, waxaan subaxdii la soo toosay qarqaryo, qandho, iyo lug cas oo xanuunaysa. Anigoo u malaynaya inay tani is bogsiin doonto, waxaan aaday farmashiyaha Watson si aan u helo xoogaa asbiriin ah. Taasi waxay hoos u dhigtay heerkulkayga. Waxa la iga baadhay COVID wuuna soo noqday diidmo Arbacadii, waxaan u wareejiyay huteelka goobta ee Shirarka WTTC, the Marriott Manila. Waxaan u labbistay shir-madaxeedka WTTC casho soo dhaweyn ah laakiin waxaan go'aansaday inaan ka boodo dhammaan ka dib. Xanuunkii lugta bidix ayaa iga qabsaday.
Subaxdii, waxaan wiishka kula dhex orday Gerald Lawless oo aan uga sheekeeyay lugtayda. Wuxuu igu booriyay in aan ka eego xafiiska caafimaadka ee hoteelka. Xafiiska caafimaadka waxaa maamuli jiray Ilaalada Xeebaha Filibiin.
Waxa aan aaday xafiiskii,waxa ay igu qaadatay 2 saacadood in aan qanciyo oo aan horay iyo gadaal uga tashado ka hor inta aanan go'aansan in lugtayda isbitaalka lagu baaro. Dhakhtarka wacitaanka dhacdada WTTC ee loo yaqaan ambulaanska Ilaalada Xeebta, waxaanu u kaxnay qolka gargaarka degdegga ah ee Xarunta Caafimaadka Makati ee Manila.
Halkaa, wax waliba si degdeg ah ayay u socdeen. Waxa la i galiyay qol go'doon ah si aan u sugo natiijada baadhista PCR COVID. Labadii saacadoodba mar baaritaan kale ayaa la igu sameeyay. Tani waxay la timid shaqo badan oo dhiig ah, tallaalada teetanada, iyo in la saaray qiyaaso badan oo antibiyootik ah iyada oo loo marayo IV.
Nasiib wanaag baaritaankayga PCR ayaa soo noqday diidmo maalintii labaad, waxaana la i siiyay doorashada 5 qol oo isbitaalka ah. Waxaan doortay qolka weyn ee gaarka ah. Way weynayd, si fiican baa loo goglay, oo waxay u ekayd qol huteel marka loo eego qolka cisbitaalka.
Dhanka kale, 3 kooxood oo madax-bannaan oo dhakhaatiir ah ayaa sameeyay baaritaan kasta oo suurtagal ah. Laga soo bilaabo ultrasound ilaa raajada xabadka, shaqada dhiiga iyo saxarada - baadhistii ugu badnayd ee aan abid sameeyo.
Natiijadu: Waxaa laygu ogaaday bakteeriya hilib-cuni ah oo ku taal lugtayda bidix - xaalad khatar ah oo aad dhif u ah. Sababtu waxay u badan tahay inay ahayd goynta yar ee aan ka helay pedicure-ka Honolulu.
Si aad uga dhigto mid aad u xiiso badan, laba xinjiro oo dhiig ah ayaa la ogaaday inta lagu guda jiro habka ultrasound ee isla lugta, taas oo iga ilaalinaysa xitaa inaan ka fekero inaan diyaarad guri ku galo. Waxa la i saaray dhiig khafiifiye.
Natiijadii ka soo baxday dhammaan baaritaannadaas waxay i siiyeen sawir dhammaystiran oo ku saabsan caafimaadkayga. Dhakhaatiirta wadnuhu waxa ay beddeleen is biirsaday cadaadiska dhiigga ee aan qaadanayey sannado badan, cadaadiska dhiiggaygu hadda weligii sidaas uma fiicna.
Kalkaalisooyinku waxay noqdeen saaxiibaday wanaagsan. Shaqaalaha caafimaadka Filibiin ayaa caan ku ah adduunka oo dhan inay si xamaasad leh ugu adeegaan. Waxaan jeclaan lahaa in aan xasuusto magaca kalkaalisada oo u raadisay fiilada charger ee iPhone-kayga oo ii keentay aniga oo dhoola cadeynaya.
Adeeg tayo leh oo naxariis leh waa waxa Xarunta Caafimaadka ee Mapati ay u dejisay yoolkeeda- rugtuna waxay bixinaysaa dhinacan.
"Waxaan qalbiyadeenna gelinaa wax kasta oo aan sameyno - ku noolow qiyamkayaga annagoo samaynayna waxa saxda ah ee caafimaadka iyo badbaadada bukaannada, wanaagga asxaabta, iyo wanaagga weyn ee MMC," ayaa ku jirta bayaanka howlgalka isbitaalka. website.
"Xarunta caafimaadka Makati waxay si is-hoosaysiin ah u aqbashay Gawad Bayaning Kalusugan abaal-marinaha ay bixiso ganacsatada iyo madaxda daryeelka caafimaadka ee dalka. Aqoonsiga kuwan oo kale ah ayaa noo ogolaanaya inaan u dabaaldegno sheekooyinka geesiyaashayada caafimaad ee geesiyaasha ah kuwaas oo si joogto ah naftooda khatar ugu geliya si ay u badbaadiyaan kuwa kale. "
Dhakhtarkayga hormuudka ah, khabiir ku ah cudurrada faafa, ayaa dhowaan ku guuleystay abaalmarintan.
Xarunta caafimaadka ee Makati waxaa aasaasay dhakhaatiir iyo ganacsato reer Filibiin ah oo caan ah 1969kii.
Sheekadu waxay bilaabatay horraantii 1960-meeyadii markii dhakhtarka dumarka-Gynecologist Constantino P. Manahan, MD, oo ay weheliyaan dhakhtarka qalliinka Jose Y. Fores, MD, iyo dhakhtarka wadnaha Mariano M. Alimurung, MD, waxay go'aansadeen inay dhisaan xarun caafimaad oo heer caalami ah oo ku taal Makati.
Waqtigaas, Makati wuxuu hadda bilaabay inuu u kaco sidii xarun degaan iyo ganacsi oo mashquul badan. Shirkada Ayala ayaa wali fulinaysay wajiyadii hore ee qorshaheeda ku aadan in xaafada Manila ay ka dhigto ganacsiga ugu horeeya ee dalka. Qorshahaasi wuxuu u baahday isbitaal casri ah oo bulshada ugu adeega.
Si loo ururiyo dhaqaalaha dhismaha, aasaasayaashu waxay raadiyeen dhakhaatiir iyo xirfadlayaal kale oo la wadaagay riyadoodii. Waxay soo direen ergey, Atty. Artemio Delfino, oo ku wajahan Mareykanka si uu u soo indha-indheeyo maalgashadayaasha badan.
Maajo 31, 1969, Xarunta Caafimaadka Makati waxay si rasmi ah albaabadeeda uga furtay dadweynaha. Aasaasayaasheeda, waxay calaamadisay fulinta riyo iyo gunaanadkii sannadaha shaqo adag iyo allabari si ay u bixiso daryeel caafimaad oo heer caalami ah oo Filibiin ah.
Maajo 31, 2019, Xarunta Caafimaadka Makati ayaa u dabbaaldegtay sannad-guuradeedii dahabiga ahayd. Bulshada Makati Med waxay xustay wax-ka-qabashada qiimaha leh ee aabayaasha dhidibbada u taagay dhaxalka cisbitaalka. Buug miiska qaxwada ah oo cinwaankiisu yahay “Ginintuan” (Golden) ayaa la daahfuray si loogu taariikheeyo sheekada machadku iyo dhaxalka inta 50 sano ah ay u adeegaysay Filibiin iyo bulshada caalamka.
Makati Med, Malasakit waxay ku qeexan tahay Siyaasadeeda Tayada: "Waxaan qalbiyadeenna gelinaa wax kasta oo aan sameyno - ku noolow qiyamkayaga annagoo samaynayna waxa saxda ah ee caafimaadka iyo badbaadada bukaannada, fayoobida asxaabta, iyo wanaagga weyn ee MMC."
Bixinta adeegyo daryeel caafimaad oo karti leh, ku habboon, badbaado leh, oo ka jawaabi kara natiijooyinka bukaan-socodka ee wanaagsan iyo heerka ugu sarreeya ee qanacsanaanta bukaanka iyo asxaabta.
Muujinaya mabaadi'da suuban, akhlaaqda, iyo anshaxa shaqada; marna aan u dhimayn magaca iyo heerarka anshaxa isbitaalka.
Ilaalinta xeerka anshaxa isbitaalka iyo heerarka anshaxa ee qofka xirfadiisa; si joogto ah u muujiya kartida gudashada waajibaadkiisa.
Muujinta walaac dhab ah iyo naxariis iyadoo loo marayo erayo iyo ficilo u horseedaya ladnaanta sare ee bukaanka iyo asxaabta.
In si wadajir ah oo ixtiraam leh loola kaashado kooxda si loo gaaro yool guud.
Waxa la i sii daayay 5 habeen ka dib, waxaanan u guuray Hudheelka Marriott ee Manila. Qolkaygu lama taaban, oo waxa aan dareemay in aan guriga ku soo laabanayo.
Waxaa iga soo qaaday Sharlene Batin oo ka socota Waaxda Dalxiiska ee Filibiin, iyo Verna Covar Buensuceso, Kaaliyaha Xoghayaha Waaxda.
Maribel Rodriguez, VP Sare ee WTTC ayaa i hubin jirtay maalin kasta.
Khibradan la xaqiijiyay dalxiisku waxay ku saabsan tahay saaxiibtinimada, xiriirka dadka, iyo nabadda.
Dalxiiska waa wax ka badan ganacsi oo kaliya, waa ganacsi naf leh.
Hadda waan ka soo kabanayaa Gobolka Hyatt ee Manila, Magaalada Riyooyinka, oo leh xaashi dheer oo tilmaamo iyo daawooyin ah.
Saaxiibadayda cusub ee Guddiga Dalxiiska ee Filibiin ayaa ii kaxeeyay furitaanka Bandhigga Kafeega Manila xalay - aad u xiiso badan, qof kasta oo i yaqaanna wuu fahmayaa inta aan jeclahay kafeega.
Juergen Steinmetz & Sharlene Batin, Waaxda Dalxiiska ee Philippine
Ku raaxayso fasalka koowaad oo caafimaad leh wax ka yar gudaha Filibiin!
"Waa sir in la kashifo oo la sameeyo in la soo baxo oo la galo fayraska", Juergen Steinmetz ayaa yidhi. "Filibiin waxay noqon doontaa meesha ugu horeysa ee loo aado dalxiiska caafimaadka. Dhammaan maaddooyinka ayaa halkan yaal. Dhakhaatiir heer caalami ah oo heer sare ah iyo tas-hiilaad, kalkaaliyeyaal ilaalinaya heerka daryeelka tayada sare leh ee adduunka oo dhan, iyo waddan qurux badan, xeebo cajiib ah, cunto wanaagsan, iyo magaalooyin xiiso leh.”
Intee bay ahayd biilka?
Tani waa qaybta aan la rumaysan karin. In kasta oo ay ku kacday $3000.00 kaliya in la arko gudaha qolka degdega ah ee cisbitaalka Maraykanka, dhammaan biilka waxa ku jira dhammaan imtixaanada, khidmadaha dhakhtarka, qol cisbitaal oo qaali ah oo 4 habeen ah, qolka karantiilka, qolka degdega ah, dhammaan daawooyinka, iyo daryeelka guriga: $5000.00
UWA Waxay Ku Wareejisay US$825,000 Bulshooyinka Beerta Murchison Falls
Xaqiijinta Cuntada Suuqa 2022 Cabbirka, Horumarinta...
Yotel Ayaa Markii Ugu Horeysay Ka Bilaabay Huteel Wadajir Ah Gudaha Magaalada Miami
Marion Primeau wuxuu leeyahay,
Abriil 30, 2022 markay tahay 03:47
Runtii aad baan uga helay maqaalkii caafimaadka waad ku mahadsan tahay wadaagida sheekada, waxaanan ku faraxsanahay in aad mar kale ladan tahay.
Nanny wiilkeyga wuxuu sidoo kale ka yimid Filibiin. Waxaan xusuustaa sannadahan oo dhan ka dib inay aad ugu dadaali jirtay oo ay maalin walba u noolayd farxadda wiilkayga ilaa ay naga tagtay markii uu dugsiga bilaabay. Weli waxaan u xiisay saaxiibkay iyo naantii wiilkayga si aan u fahmo dedaalka laguula dhaqmay si wanaagsan.
Oo waan ku raaxaystaa maqaallada markaa ha u diyaargaroobin caafimaadkaaga.